संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए शपथ,कसको कहाँ हुँदैछ नियुक्ति ? – Radio shreenagar
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए शपथ,कसको कहाँ हुँदैछ नियुक्ति ?
२१ माघ २०७७, बुधबार १०:४५
माघ २१ काठमाडौं : संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरेका व्यक्तिहरुको आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सपथ ग्रहण गराएका छन्।
जबराले आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरूलाई शपथ गराएका हुन् भने सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले शपथ खुवाए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका व्यक्तिहरुको राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरे।
गत मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार र मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा ४५ जना व्यक्तको नियुक्तिका लाग सिफारिश गरेको थियो।
सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका कारण उनीहरुले संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नु परेन। संघीय सांसदको कार्य संचालन नियमावली २०७५ अनुसार संवैधानिक परिषदबाट सिफारिश भएकाहरुलाई ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएमा स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ।
यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारले पठाएको सक्कल प्रति नै फिर्ता पठाएका थिए। आफूसँग छलफल नै नगरी फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित मितिः २१ माघ २०७७, बुधबार १०:४५ |
Prevअचेल के गर्दैछन् ज्ञानेन्द्र सरकारका सारथि ?
Nextहड्ताल गरे कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी